မယ်သံ: သမီးလေး ၈ လ
Thameesan November 19, 2011 at 2:11 PM
သမီးလေးကို ဒီမှာပဲ မှတ်နေတာ... ။
ကလေးလေးတွေက အရွယ်တူရင် တိုးတက်မှုလည်းတူတယ်ထင်ပ... ဒီသမီးလေး လက်၂ ဘက်ထောက်ပြီး ဒိုက်ထိုးသလိုလုပ်တုံးက အိမ်ကသမီးလေးလာ်း လုပ်တယ်.. ခု သူက လေးဘက်ထောက်သွားနေပြီ... Nestle က ဆန်မှုန့်ပဲ စားနေသေးတယ်.. သဘောင်္သီးမှည့်စားတယ်... အသီးဇူးလေးတွေမစားဘူး.. မြန်မာပြည်လို ပဲပြုတ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရရင် သမီးကိုကျွေးချင်လိုက်တာ...
သမီးလေးဟေမာ ၈ လပြည့်မွေးနေ့ကစ.. ရေလိုအေးလို့ ပန်းလိုမွှေးပါစေ
JuneOne November 20, 2011 at 10:49 PM
Happy birthday thameelay!!so cute.
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 21, 2011 at 1:39 PM
မြသွေးနီ November 21, 2011 at 3:13 PM
သမီးလေးမွေးနေ့မှသည် ကျန်းမာချမ်းသာစွာမိသားစုနဲ့ ရာသက်တိုင် ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပါစေ..။
မဒမ်ကိုး November 22, 2011 at 1:47 PM
မမရေ သမီးလေးက ချစ်စရာလေးနော် ၀၀ကစ်ကစ်ကလေးရော ...
သြော် ..မမသမီးလေးမြင်ခါမှ ပိုတောင်သတိရသွားမိပါရဲ့ .
အင်း ကံပါလာရင်တော့ ပြန်ရမယ်ထင်တာပါပဲ
ကုစုကျွန်းကတောင်ပေါ်မှာသွားဆုတောင်းခဲ့တယ် မမရေ သားလေးလိုချင်လို့ပါး)
Thandar Lwin November 26, 2011 at 6:21 PM
မိစံလေး ..အမြဲလာအားပေးတာ ကျေးကျေး။
စင်စင် ရေ သမီးကတော့ အရမ်းအစားပုပ်တယ် ။
ဂျွန်ဝမ်းရေ တကယ်ချစ်စရာလေးလား ..ဂျွန်ဝမ်းကလေးတွေလဲ အရမ်းချစ်ဘို့ကောင်းတယ်။
အမ မြသွေးနီ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ အမ။
မဒမ်ရေ လာလည်တာကျေးဇူးညီမ ဒါပေမဲ့ သွေးနုနုမှာ ကွန်ပျူတာ မကြည့်ရဘူးကွဲ့။